I-Ultimate Guide kuya ku-Clomid yokuphatha ukungabi nabantwana kuma-females
Konke mayelana ne-Clomid
I-1. Iyini i-Clomid? Isebenza kanjani? I-2. Ukusetshenziswa kwe-Clomid
I-3. Isilinganiso se-Clomid I-4. Imiphumela ye-Clomid
I-5.Clomid Impilo yokuphila I-6. I-Clomid Side Effects
I-7. Izinzuzo ze-Clomid I-8. Ukubuyekezwa kwe-Clomid
I-9. I-Clomid yokudayiswa I-10. I-Clomid yokuphatha ukungabi nabantwana kubesifazane- (Isifinyezo)
Iyini i-Clomid? Isebenza kanjani?
I-Clomiphene citrate nayo ibizwe I-Clomid (I-50-41-9), imithi yomlomo esetshenziselwa ukwelapha izinhlobo ezithile zezintombi ezingabantwana. Emhlabeni wonke kudayiswa ngaphansi kwamagama ahlukahlukene efana namagama e-Clomidac, ama-clomene, i-Bemot, i-Clomi, i-clomifen, i-Beclom, i-Blesifen, i-Biogen, i-Blesifen, i-Chloramiphene, i-ClomHEXAL, et al. Ukusetshenziswa kwalo kwavunyelwa futhi kunconywa ukusetshenziswa kwezokwelapha ku-1967 e-USA. Yonke imithi yezempilo idinga lo muthi ophephile kakhulu futhi osebenza kahle ngokusho kohlu lweMithi Yezobuchwepheshe e-World Health Organization. Itholakala njengemithi ejwayelekile. I-Clomid ingenye yezindlela eziningana zokungeniswa kwe-ovulation kwabesifazane abangenayo inzalo ngenxa ye-oligo-ovulation nokugcoba.
Umuthi usebenza ngendlela onomzimba ocabanga ukuthi amazinga e-estrogen aphansi futhi ngaleyo ndlela abangela igciwane le-pituitary ukuthuthukisa i-hormone i-LH noma i-follicle evuselela i-hormone eyaziwa ngokuthi i-FSH secretion. Amazinga aphezulu we-FSH akhuthaza ama-ovari ukuthi abe neyodwa noma ngaphezulu yama-folicle amaqanda akhiqizwa azokwenziwa noma akhiqizwe ekuvuthweni. Ngakolunye uhlangothi, amazinga aphezulu e-LH akhuthaza ukuvunguza.
I-Clomid (50-41-9) bekulokhu okuthandwa kakhulu phakathi kwalabo abacatshangelwa ukuthi bangama-oldsters iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu odokotela bezosizo lwezokwelapha noma ama-OB-GYN ngokuvamile abanika i-clomiphene citrate ngaphambi kokuba babheke eyodwa noma ezimbili ukuhlola ochwepheshe bezobeletha ukunakekelwa okukhethekile okukhethekile. Ezinye izazi zokukhiqiza zibeka i-clomiphene citrate futhi. Le mithi ayiluleki kulabo abanikazi bama-ovari abangakhi amaqanda ngokufanele (ukuhluleka okuyisisekelo se-pituitary noma ubulili).
Isimo sangokomzimba sangasese, ukuphuma kwegazi, i-amenorrhea, i-amenorrhea yesibili, i-amenorrheas yangemva kokukhulelwa, i-galactorrhoea, i-syndrome yama-ovaries we-polycystic, i-Chiari-Remel disease, i-steroid hormone insufficiency, i-oligospermatism, ukuhlonza ukuphazanyiswa komsebenzi we-gonadotrophic we-endocrine gland. I-Clomiphene citrate ivame ukuwusizo kulabo abazama ukukhuthaza inhlangano yeZizwe Ezikhulelwe abakhulelwe ukuthi banezinkinga ezilandelayo:
Ukuvuthwa okungavamile: kuyinkimbinkimbi yokukhulelwa lapho insizwa yendawo yowesifazane ingavumelani ukuthi ayikwazi ukuqiniseka uma i-ovulating. Uma isebenza ngokuphumelelayo, ukusetshenziswa kwe-clomiphene citrate kufanele kwakha impendulo eqinisekisiwe ye-ovulatory yemvume yokulala ngokobulili noma ukungena ngaphakathi kwe-intrauterine.
Izinkinga ze-Male Factor: uma nje kukhona i-tangle enekhwalithi yomzimba ewuketshezi, ngokuvamile uchwepheshe wakho wezokwelapha angase abonise ukuthi i-intrauterine insemination ikhulisa amathuba okuphila ngokomzimba. I-Clomiphene citrate ivame ukujwayele ukwenza lula uhlelo lwesikhashana lokwaziswa ngomjikelezo wesifazane.
Ukungabi nalutho okungaqondakali: i-clomiphene citrate iye yaboniswa ngokuphumelelayo ekukhuleni izinga lempilo yemibhangqwana enemibhangqwana emisha enempilo eye yahlaziywa ngokujwayelekile yenzalo yokuzala, nokho noma kunjalo isakhiwo sendawo sinokuhluleka ukuthola ukukhulelwa.
Akululekwa ukuba wenze ukuhlolwa kwe-ultrasound ukukhipha noma yikuphi ukugcoba kwe-gland okuyisigcino sokusabalala ngaphambi kokuqala umjikelezo omusha wezokwelapha.
I-Clomifene isetshenziselwe ukusebenzisana ngezobuchwepheshe obuhlukahlukene ezisekelwe ngezithuthuthu ukukhulisa izinga lokuphumelela lalezo zindlela ezehlukene
I-Clomifene isetshenziswa kakhulu ekwelapheni kwe-eunuchoidism njengenye kwenye ukunakekelwa kwezokwelapha esikhundleni se-androgenic.
Ifomu lokulinganisa: iphilisi i-NDC 0068-0226-30: amaphilisi e-50 mg ezinqoleni zamashumi amathathu
Amathebulethi angaphansi kweyunithi eyindilinga, emhlophe, eboshwe, kanye ne-clomiphene citrate engamashumi amahlanu.
Gcina amaphilisi ekushiseni okulawulwayo 59-86 ° F (15-30 ° C). Isihlangu esivela ekushiseni, ekukhanyeni, nasemanzini amaningi, nokugcina ezitsheni ezivaliwe.
Ukubheka kanye nokwelashwa kwabakhanjelwe ukwelashwa kwe-clomiphene ukwelapha kufanele kuqondiswe odokotela asebekhulile ekuphatheni okhethekile kwezokwelapha noma izifo ze-endocrine. Iziguli kufanele zikhethwe ukwelashwa nge-clomiphene citrate kuphela lapho kuhlaziywa ngokucophelela kokuhlaziya. Ukuhlelwa kokunakekelwa kwezokwelapha kufanele kushicilelwe kusengaphambili. Izindleko zokufinyelela umgomo wokunakekelwa kwezokwelapha kufanele zifakwe ngaphandle noma ziphathwe ngokwanele ngaphambi kokuqala i-clomiphene citrate. Inhloso yokwelapha kufanele ilinganiswe nezingozi ezingase zibe khona futhi okukhulunywe ngayo nesiguli et al. othintekayo ngaphakathi kwesimo somzimba.
Ukwelashwa kwesiguli esikhethiwe kufanele, kuqala, umthamo wekhofi, i-50 mg yansuku zonke (i-tablet ye-1) izinsuku ezinhlanu. Umthamo kufanele udluliselwe kuphela kulawo iziguli ze-United Nations agency akukhiphi ukusabela ekuphenduleni ama-cyclic 50 mg clomiphene citrate. Ubuningi bekhofi noma ubude benkambo yokwelashwa kunconywa ikakhulukazi uma ukuzwela okwedlulele kwi-hormone ye-pituitary kucatshangwa, njengeziguli ezine-polycystic ovary syndrome.
Isiguli kufanele sihlolwe ngokucophelela ukukhipha isimo somzimba, ukukhulisa ubulili, noma ukwakheka kwe-cyst phakathi kwayo yonke imjikelezo yokwelapha.
Uma ukuchithwa kwe-progestin kuhleliwe, noma uma isisu sangaphakathi sokubeletha kwesisu sangakenzeki ngaphambi kokunakekelwa kwezempilo, uhlelo lwezinsuku ezingamashumi amahlanu mg usuku zonke izinsuku ezinhlanu kufanele luqaliswe noma mayelana nosuku lwesihlanu lomjikelezo. Ukunakekelwa kwezokwelapha kungase kuqalwe nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwe-ejensi yeZizwe Ezihlangene iziguli azizange zinezifo zesisu zokubeletha ngaphakathi. Uma inqubo ye-organic iyenzeka ngalesi sifo, akusizi ngalutho ukwandisa umthamo kwimigomo yokwelashwa ephumelelayo.
Uma inqubo yezinto eziphilayo ingabonakali ukuba yenzeke ngenkathi yinkambo yokuqala yokunakekelwa kwezokwelapha, inkambo yesibili yemihla ngemihla (amaphilisi amabili amahlanu amaminithi anikezwa njengomthamo owodwa wansuku zonke) kufanele uhambisane nezinsuku ezinhlanu. Leli klasi lingabuye liqalwe ngemuva kwezinsuku ezingamashumi amathathu kanye nendawo eyedlule yodwa yokuqapha indawo eyithathwe ukuze ingabikho ukutholakala kokubeletha. Ukwandisa umthamo noma isikhathi sokunakekelwa kwezokwelapha ohlangothini olude i-mg mg / usuku ngezinsuku ezinhlanu alulekwa.
Iningi leziguli ze-United Nations unit unit unit ukuhlela ukukhipha zingakwenza kanjalo kanye inkambo eyinhloko yokwelashwa. Uma inqubo yezinto eziphilayo ingenzeki kanye nezifundo ezintathu zokunakekelwa kwezempilo, ukwelashwa okwengeziwe nge-clomiphene citrate akukwaziswa kanti futhi isiguli kufanele siphinde sibheke kabusha. Uma izimpendulo ezintathu ze-ovulatory zenzeka, noma kunjalo ukubeletha akutholakalanga, ukwelashwa okwengeziwe akukwaziswa.
Njengoba i-clomiphene citrate iholela ekwenzeni amaqanda amaningi, amathuba akho wokuthola izimpande (amawele noma ama-triplets ... ngezinye izikhathi ngaphezulu) akhuphuka. Ukusebenza nomchwepheshe owaziwayo wokuzala inhlangano yeZizwe Ezihlangene, ubeka ukuthi umthamo oqondile unciphisa amathuba okuphindaphinda okuphindaphindiwe.
I-IVF ingenye indlela yokunciphisa inani labantwana ngokubeletha komphumela womphumela womama / wezingane.
Uma kuhilela ukugqugquzela inqubo ye-organic, i-clomiphene citrate iyinqoba ngokuphawulekayo, okuholela ekubeni kukhishwe amaqanda avuthiwe cishe emashumini ayisishiyagalombili yamantombazane e-United Nations.
Uma usanda kumisa i-clomiphene citrate, kunethuba ongase ube nakho ubuchwepheshe bokuhlala isikhathi eside (noma amasonto angenakwenzeka) uma umthamo wakho wokugcina. Lezi zici ezibonakalayo ezibonakalayo zingase ziholele ukuthi usobala ukuthi i-clomiphene citrate kanye nama-metabolite ayo kufanele abe sesistimu yakho futhi emangalisise isikhathi eside ngaphambi kokuqedwa. Ukuze ubone ukuthi ngabe i-clomiphene citrate ende ihlala nini e-oda lakho, kuyadingeka ucabange ngokuqedwa kokuphila kwayo kwezinsuku eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa.
Ukuqedwa kwezinsuku ezinhlanu kuya kweziyisikhombisa I-half-life Clomid kusho ukuthi kuzothatha cishe isonto eligcwele uma umthamo wakho wokugcina uqeda isilinganiso samakhulu amahlanu we-clomiphene citrate kusuka ekujikelezeni. Ukwazi ukuthi i-clomiphene igqugquzela ukukhipha isikhathi eside sokuphila, uzobe ulungile ekucabangeni kwakho ukuthi kusekhona ohlelweni lwakho - noma ngabe sekuyimasonto kusukela kwesilinganiso sakho sokugcina. Ngokwesilinganiso, kuzothatha phakathi kwezinsuku ezingamashumi amabili nesikhombisa. 5 nezinsuku ze-38.5 ukuqeda i-clomiphene citrate kusuka ohlelweni lwakho ngokuphelele; cishe amasonto amane kuya ayisithupha
Eminye imibiko idokhumenti yokuthi ingxenye ka-Clomid yokuphila ingamasonto amabili (izinsuku ezingu-14), okusho ukuthi i-citomiphene citrate ingagcina isistimu yakho kuze kube amasonto ayishumi nanye kuphela uma umthamo wakho wokugcina. Abasebenzisi abaningi kufanele balindele ukuthi i-clomiphene citrate ihlale isakazwa phakathi kwezinyanga ezintathu nezinyanga ezintathu uma iselashwa. Kumele kuqashelwe ukuthi i-clomiphene citrate iqukethe ama-isomers amaningi: i-clomiphene (~ 62%) ne-zuclomiphene (~ 38%).
Ukuphela kwengxenye yokuphila kwe-clomiphene yamakhemikhali yamakhemikhali kuhamba ngamahora angamashumi amabili nane, kuyilapho okwakhiwa kwamakhemikhali e-zuclomiphene kubanzi kakhulu. I-clomiphene isakhiwe ekupheleni kwamasonto owodwa, kanti ingxenye ye-zuclomiphene inesibopho sokuphela kwesikhathi sokuqedwa kukaClomid. I-Zuclomiphene ibonakala ngaphakathi kwe-plasma kahle kanye nenyanga eyodwa yephetho le-clomiphene citrate futhi ilandelela inani elibikiwe ekungeneni okungcolile kanye kanye namasonto ayishumi nambili
Nakuba i-clomiphene ihlala isakazwa ngokusho kwamasonto amane kuya kweshumi nanye uma umthamo wokugcina womsebenzisi, akubona bonke abasebenzisi abangakwazi ukuqeda umuthi ngendlela efanayo. Abanye abasebenzisi bangase baqede i-enclomiphene ne-zuclomiphene isomers esheshayo kunesilinganiso (phakathi kwamasonto ayisithupha), kanti abanye kufanele baqhubeke benesisindo se-plasma uma sekuphele amasonto ayisithupha. Ukuhlukahluka komuntu ngamunye ekuvinjisweni kokuqothula kwe-clomiphene kungachazwa yiziguquko ezifana nezici ngabanye, isilinganiso, kanye nesikhathi sokuphatha.
Izici zomuntu ngamunye
Amantombazane amabili angase athole i-50 mg clomiphene ngezinsuku eziyisihlanu ezilandelanayo ngesikhathi esifanayo emjikelezweni wabo wezintambo eziphansi. Noma kunjalo, omunye umsebenzisi angase aqede isidakamizwa ngokushesha kunomunye. Konke kuncike emandleni omuntu ngabanye. Kubasebenzisi abathile, lesi sidakamizwa singahlala sikhuthele isikhathi eside kanti abanye, lesi sidakamizwa sizohlala isikhathi esifushane.
I-Genetics: Izincwadi zezokwelapha zibonisa ukuthi i-clomiphene ilawulwa yizici ezinamandla ezingaphakathi. Yize izindlela eziqondile zangaphakathi zomzimba eziphendulwa ngokusungula umzimba kwazo azicaciswanga, isiteshi esisodwa esikholelwa ukuthi sidlala indima enkulu yi-CYP2D6 (i-cytochrome P450 2D6).
I-Clomid Side Effects
Iningi lezidakamizwa uma kungenabo bonke abanamathuba abo kanye nokuncipha kwabo kuye ngokuthi uyisebenzisa kanjani. Isibonelo, uma kusetshenziswe kabi, noma uma ngaphezulu, i-Clomid ingafaka abasebenzisi engozini yokuthuthukisa uhla lwemiphumela emibi. Nokho, kukhona ezinye Imiphumela emibi ye-Clomid okuyinto evamile futhi inganyamalala ngaphakathi kwesikhashana. Ngakolunye uhlangothi, ungase ube nemiphumela emibi kakhulu lapho uthola imithwalo ephakeme kunalokho okushiwo udokotela wakho. Imiphumela emibi ejwayelekile phakathi kwabasebenzisi be-Clomid ihlanganisa;
Ububele besisu, ubuhlungu, nokungahambi kahle
Ukusuka kwamagciwane kanye negazi lomzimba
Kodwa-ke, kunemiphumela emibi kakhulu, kodwa kwenzeka kuphela kuye ngokuthi uthatha kanjani umuthi. Ngakolunye uhlangothi, uhlelo lomzimba womuntu luyisici esibalulekile salokho okuhlangenwe nakho ngemuva kokuthatha i-Clomid. Abanye abantu bazobhekana nemiphumela emibi kakhulu noma ngabe bathatha isilinganiso esinqunyiwe noma esincane. Yingakho ngaso sonke isikhathi sicebisa amakhasimende ethu ukuba ahlolwe ngaphambi kokuqala ukuthatha lesi sidakamizwa. Uma kwenzeka uthola noma iyiphi yalezi ziphumo, kufanele ufune usizo lwezempilo ngokushesha;
Kumele futhi uqaphele ukuthi uma izinto zingahambi kahle, i-Clomid ingaholela ekukhulelwe okuningi. Kukhona ithuba eliphakeme lokuthi ungakhulelwa uma usebenzisa lo mkhiqizo, nge-7% ukuthi uzothola amawele kanye nethuba le-0.5% ukuthi uzothola ama-triplets noma ama-oda aphezulu. Kuwukuhlakanipha ukuthi ukhulume nodokotela wakho kuqala, uxoxe ngengozi, futhi unqume ukuthi ufanele yini ukuthwala amawele noma ukuphindaphinda. Uma ungakakulungeli ukukhulelwa, kuwukuhlakanipha ukuqapha okusheshayo.
Ngaphambi kokusebenzisa i-Clomid, qiniseka ukuthi awunayo i-allergen noma i-hypersensitive kunoma yiziphi izithako zayo. Ungakwazi ukukhuluma nodokotela wakho kuqala futhi uvumele iseluleko sezobuchwepheshe ukuthi ufanele yini ukuyisebenzisa. Ngale ndlela, ungakwazi ukugwema ukuzibeka engozini yokuthola noma yimuphi wale miphumela emibi. Futhi, qiniseka ukuthi ulandela umthamo onconyiwe.
Kulabo besifazane abasebenzisa lo mkhiqizo ngendlela efanele futhi abayithinti, kunezinzuzo eziningi ezingase zilindele. Qinisekisa ukuthi uhilela udokotela wakho ngaphambi, ngesikhathi, nangemva kokuqeda isilinganiso sakho se-Clomid ukuze ujabulele kakhulu Izinzuzo ze-Clomid. I-Clomid inikeza izinzuzo ezihlukahlukene kubasebenzisi okulandelayo;
Kuyindleko ephumelelayo - lokhu kungenye yezindlela ezingabizi kakhulu zokwelapha ukungasebenzi. Izindleko ze-Clomid ziqhathaniswa nezinye izinyathelo ezinjenge-IVF ezingenakuqhathaniswa. Kufikile njengomgcini wokuphila wabantu abaye babhekana nezinkinga zokungabikho komuntu kodwa bengatholi ukwelashwa ngenxa yokuntuleka kwezimali. Imiphumela abasebenzisi abayitholayo kuyo kudlulela inani lemali esetshenzisiwe.
Kuyinto imithi yomlomo - imithi ngomlomo ilula futhi ifika ebuhlungu obuncane. Lokhu akufani namagciwane lapho abasebenzisi kufanele bafake khona izinaliti kuwo wonke umzimba wabo, okungaba yinto engavamile. I-Clomid ingenye yezokwelapha ezimbalwa zokungabi nabantwana ezilondoloza abesifazane ezinkingeni ezinjalo.
Umnakekeli oyinhloko angayichaza - izindaba ezinhle ukuthi akudingeki uvakashele isazi sokuzala ukuthola i-Clomid kadokotela. Lokhu kuthuthukisa lula, ikakhulukazi uma ungazi noma yiluphi uchwepheshe wezokuzala eduze kwakho. Yisindisi sesikhathi, futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi iphephile ukusebenzisa uma ulandela isiqondiso esinconywayo sokusetshenziswa.
Iza nemiphumela emibi embalwa - uma isetshenziswe kahle, i-Clomid inemiphumela emibi embalwa. Uma uthola noma yikuphi, bumnene kuphela abazohamba isikhathi esifushane ngemuva kokuyeka ukusetshenziswa noma ngemuva kokuba umzimba wakho usetshenziselwe imiphumela. Futhi, khumbula ukuthenga lesi sidakamizwa kumkhiqizi ohloniphekile noma umhlinzeki ukuqinisekisa ukuthi uthole umkhiqizo wekhwalithi ngemiphumela engcono ye-Clomid.
Lo mkhiqizo uthola izibuyekezo eziningi ezinhle nezilinganiso ezivela kulabo abazisebenzise ngaphambili. Abaningi balabo abasetshenzisiwe bathi bakuthola ngokushesha Imiphumela ye-Clomid, futhi bamangala ukuthi umkhiqizo wasabela kanjani emizimbeni yabo. Iningi lalaba besifazane lathi balahlekelwe isikhathi sabo ngenkathi abanye beqala imijikelezo engavamile futhi behluleka ukukhulelwa, kodwa lokho bekuze kube yilapho befunda ngale mithi emnandi. Futhi, iningi labo lalinemiphumela phakathi nezinyanga ezintathu ngemuva kokusetshenziswa.
Abambalwa babo bakhononda ngekhanda, isicanucanu, isifo sohudo, nokuhlanza kodwa iningi lalabo abavuma ngempela ukuthi badlulela izidakamizwa futhi imiphumela emibi yema ngemva kokulungisa ukusetshenziswa. Ngakolunye uhlangothi, iningi labasebenzisi abakhononda ngokuba nesipiliyoni esibi noClomid baye bavuma ukuthi basebenzise lesi sidakamizwa ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha. Kuyinto evamile kumkhiqizo wezokwelapha ukuthola ukuxuba okuxubile nokubuyekezwa kusuka kubasebenzisi abahlukile. Ngokuvamile, i-Clomid iyimithi emihle kakhulu yokwelapha amacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ingxenye enhle yukuthi ngeke kudingeke ukuba ujobe njalo ngoba kuyisidakamizwa somlomo. Uqala futhi ukuthola imiphumela esikhathini esifushane ngisho nabanye abasebenzisi babika ukukhulelwa emva kwezinyanga ezintathu kuphela zokulinganisa.
Umhlahlandlela Wokugcina We Testosterone decanoate for Bodybuilding(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
Manje njengoba udokotela wakho ekunikeze imithi, kuyinto evamile ukuzizwa ujabule futhi uphazamiseke ukuzama. Lokhu kungaholela ekuthengeni kusuka kumthengisi wokuqala ozayo, futhi lokho kuyiphutha elikhulu. Uma ubheka ukuthenga i-Clomid, kufanele uqaphele ukuqinisekisa ukuthi uyayithola ekuthembekeni Umphakeli we-Clomid futhi ukuthi ungawi esicupheni sobugebengu. Kuye kwaba nesidingo esikhulu salomkhiqizo, okwenze ukwanda kwenani labahlinzeki abakhuphukayo futhi befuna ukulidayisa. Uma ungaqapheli ngokwanele, uzophela ukuchitha imali yakho eningi engakwazi ukukunika imiphumela oyifunayo. Futhi, ungase Thenga i-Clomid powder lokho akuphephile ukusetshenziswa, okuyinto ekuyolethela imiphumela emibi kakhulu nobuhlungu kunokuba usuvele ubhekene nazo.
Thatha isikhathi sakho futhi ubuke umphakeli we-Clomid ongayethemba. Ukuthenga i-Clomid ku-inthanethi kukunika ukuvezwa okudingayo ukuze uthole okulungile. Hlola ukubuyekezwa kwe-inthanethi futhi ubone ukuthi yini abanye abantu abathengile imikhiqizo evela kulo mthengisi othize mayelana nomkhiqizo. Ungakwazi futhi ukuthola izincomo ezivela kumngani noma isihlobo owazi ukuthi usewusebenzise lo mkhiqizo ngaphambilini futhi uvumele ukuba bakhulume kumphakeli wabo ozithandayo. Izindleko nazo ziyinquma lapho zifuna I-Clomid yokudayiswa ngaphandle uma uhlelo lwakho lomshuwalense luhlanganisa izindleko. Akufanele uvumele ukuthi ukhululeke ngokweqile kodwa esikhundleni salokho, wenze ucwaningo, uqondisise inani lentengo yemakethe bese uya kumdayisi ngenani elifanele kakhulu.
Imithi yindaba ezwelayo, futhi kufanele uyiphathe ngokungathí sina okukhulu. Ungagijimi ekunyusweni kokuqala okuza kodwa kodwa, bheka izinga. Izindaba ezinhle ukuthi njengamanje singumhlinzeki omuhle kakhulu we-Clomid esifundeni. Ungenza i-oda lakho kalula nge-smartphone yakho, futhi sizolikhulula emnyango wakho. Izintengo zethu nazo zinengqondo kakhulu, futhi ungakwazi Thenga i-Clomid ngobuningi kusuka kuwebhusayithi yethu yomsebenzisi-friendly. Sinike ikholi noma nini lapho unemibuzo noma udinga usizo ekwenzeni i-oda yakho. Imigqa yethu yocingo ivuliwe i-24 / 7.
I-Clomid yokuphatha ukungabi nabantwana kubesifazane- (Isifinyezo)
I-Clomid iboniswe ukuthi iphumelele kakhulu uma kuziwa ekwelapheni izinkinga zokuzala ezenzweni kwabesifazane. Kusebenza ngokwenza umzimba ucabange ukuthi amazinga e-estrogen womsebenzisi aphansi kunalokho ayenjalo, okwenza ukuthi i-pituitary gland yande izinga le-follicle evuselela i-hormone. Lokhu kushukumisa i-ovary ukukhiqiza i-ovum noma i-ova, futhi umsebenzisi angakwazi ukukhulelwa ngesikhathi sokuvuthwa. Kuyisimiso esiqondile, futhi isidakamizwa sisebenzele abantu abaningi abazinika isikhathi sokubheka i-Clomid efanele (50-41-9) futhi wasisebenzisa ngendlela efanele. Uma uhlangabezana nezinkinga ezihlobene nokuzala, zama ukutshala imali kulo mkhiqizo futhi ujabulele imiphumela.
Kodwa-ke, qiniseka ukuthi uhilela udokotela wakho kwinkqubo yonke yesilinganiso semiphumela esiphezulu. Unganqikazi ukukwazisa imithi yakho uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela emibi kakhulu noma uma uthola usizo kunoma yisiphi isithako semithi. Ngokufanayo, shayela i-physic yakho uma uhlangabezana nemiphumela emibi ngaphambi kokuba isimo siphume kakhulu.
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Ukusabalalisa kokungabikho nokusebenzisa ukwelashwa kokuzala kwabesifazane abanesifo se-polycystic ovary syndrome: idatha evela ekutadisheni okuphakathi komphakathi omkhulu. Umbhalo wempilo yabesifazane, 24(4), i-299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Inhlangano ephakathi kokungaboni nokuhlukunyezwa ngokobulili kwamadoda nabesifazane. Ukubuyekezwa kwezidakamizwa zocansi, 4(4), i-353-365.